Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay muranka ka taagan doorashada iyo qodobada la isku hayo - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay muranka ka taagan doorashada iyo qodobada la...
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay muranka ka taagan doorashada iyo qodobada la isku hayo
Muqdisho (Walwaal.com)- hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame arimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arimaha doorashada dalka, shirkii Xalane ka dhacay, qodobada weli la isku mari la’yahay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in iyagoo mucaaradka ah ay isku dayeen dadaalo la isku keenayo dhamaan madaxda dowlad goboleedyada balse arintaasi ay fashilmatay, isagoona talaabadaasi ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ku dhaliilay inuusan rabin in dalka ay ka dhacdo doorsho nabdoon , isagoona sheegay inuu doonayo muddo kororsi iyo doorasho boob ah, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Siyaasiga Mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in beesha caalamka ay u dulqaadan weysay sida ay wax u wadaan madaxda dowladda, islamarkaana arrintan ay suurtagal tahay in fara gelin toos ah lagu sameeyo xaalada siyaasadeed ee dalka.
Waxaa sii kordhaya eeda ay xubnaha Mucaaradka soomaaliya ay u jeedinayaan madaxda dowladda, islamarkaana marar badan ay ku celceliyeen in madaxda haatan talada heysa aysan rabin tartan doorasho , balse dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah.
Previous articleSacuudiga oo sheegay in Xuutiyiinta aysan diyaar u ahayn Nabad ka dhalata Yemen.
Next articleGolaha ammaanka Q.M oo walaac ka muujisay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya